Laba websaydh oo aad u wanaagsan oo CSS3 iyo HTML5 ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | CSS, HTML, Khayraadka
Labada shebekadood ee CSS bilaashka ah iyo HTML5 waxay isu keenayaan tiro badan oo ikhtiyaarro bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad u adeegsato mashaariic kala duwan iyo shaqooyin. Midka ugu horreeya bogagga internetka laftiisu waxay leedahay 844 sheybaarro bilaash ah, markaa tani waa degel websaydh ah, maaddaama tirada laga reebo, waxay yihiin tayo aad u wanaagsan.
HTML5 UP dhinaca kale sidoo kale wuxuu leeyahay tiro badan oo arrimo ah si loo daboolo dhammaan baahiyahaaga HTML5. Laba websaydh oo muhiim u ah ilaha bilaashka ah taasna waxay hubaal noqon doontaa kuwa kuugu cadcad laga bilaabo maanta kahor dhammaadka sanadka si aad ugu bilowdo tan ugu fiican HTML5 arrimo suurtagal ah.
Templated.com waxay leedahay a ururinta 844 bilaash CSS iyo HTML5 arrimo waxaa naqshadeeyay oo soo saaray Cherry + AJ waxayna hoos yimaadaan Creative Commons.
Waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada naqshadeynta websaydhka oo leh sii websaydhkaaga wax gaar ah iyo in 844-ka bilaashka ah hubaal waxaad ka heli doontaa mid ku habboon shaqo.
Sida la shaaciyey waxaa lagu gartaa arrimo jawaabo leh, HTML5 + CSS3, la beddeli karo oo ku hoos jira liisanka Creative Commons. Intooda badani waa tayo aad u tiro badan waana kuwo cusbooneysiin ah marka la eego naqshadeynta oo iyagu amaahinaya inay qayb ka noqdaan mashruuc kasta ama degel kasta.
Kuwo badan ayaa u istaaga shaashadda ugu horreysa iyagoo leh sawir weyn, wax u noqday moodada sida kuwa kale ee dhigay muuqaal asalka ah oo ku jira qorshaha GIF si aad u siiso lahjad kale qaabka. Waan iftiimin karaa template la yiraahdo isbarbar dhig taasi waxay leedahay naqshad weyn taasna waxay diiradda saareysaa nuxurka, wax muhiimad weyn u leh degel tayo sare leh.
Fursad si loo helo tusaalooyin tayo leh oo go'aamin kara lahjada shaqo weyn loo soo bandhigo. Haddii aad leedahay degel websaydh leh, ha iloobin inaad la wadaagto faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 2 bogag internet-ka ah oo CSS iyo HTML5 ah oo bilaash ah
Aad baad u mahadsantahay, xiriiriye aad u xiiso badan. Waad ku mahadsantahay wadaagista;)